Ikianja Ambohimangakely: roa lahy nitondra moto maty nohitsahin’ny kamiao | NewsMada
Ikianja Ambohimangakely: roa lahy nitondra moto maty nohitsahin’ny kamiao
Par Taratra sur 12/09/2018
Mpitondra moto indray maty nofaohin’ny kamiao tany Ambohimangakely. Roa lahy indray maty. Toy izany koa tany Analalava, roa lahy nandeha moto indray maty nifandona tamin’ny 4×4.
Maty tsy tra-drano ny tovolahy roa nandeha moto Scooter miloko manga, teny Ikianja Ambohimangakely, ny alatsinainy alina tokony ho tamin’ny 9 ora alina. Araka ny vaovao teny an-toerana, voafaokan’ny kamiao izy roa lahy ireo. Samy nitodi-doha ho any Antsinanana ny lalan’ny roa tonta. Voalaza fa voafaokan’ilay kamiao avy any afara izy roa lahy ary nianjera tao ambaniny. Voatetin’ny kodiarana ireto roa lahy tamin’izany. “Tsy nahajery intsony aho, niparitaka ny atidohany, ary ny iray aza, toy ny tsy nisy loha intsony”, hoy ny fitantaran’ny nahita maso ity loza ity.
Ny antsoantson’ny olona no nahitan’ny mpamilin’ny kamiao ny loza. Nijanona ihany izy ireo nanoloana izany. Tonga teny an-toerana ny zandary nanao ny famotorana manodidina ity loza ity.
Loza tamin’ny moto tahaka izay ihany, tany Maromandia, Analalava, ny alatsinainy teo ihany fa tamin’ny 12 ora atoandro. Nifandona ny moto cross sy ny fiara 4×4 iray tamin’izany, tao anaty fiolanana be. Voa mafy ireo mpitondra moto tamin’izany, ary maty rehefa tonga tany amin’ny hopitaly. Efa nandray an-tanana ny raharaha ny mpitandro filaminana tamin’ity loza ity.
Misesy hatrany ny loza nahafatesana olona
Tsy ny moto ihany ny mamono olona fa hatramin’ny loza avy amin’ireo fiara ihany koa. Mazda iray nivadika tany amin’ny lalam-pirenena fahafito, teo amin’ny tetezan’Ankadilalana, Ambatolampy, ny alatsinainy teo. Vokatr’izany, vehivavy iray maty, ary olona 10 naratra tao anatin’ity fiara ity. Fantatra fa noho ny fandehanana mafy no nahatonga ny loza. Nidona tamin’ny sisin’ny arofanin’ny tetezana ilay fiara, ary nifatratra tamin’ny sisin-tany avy eo. Potika mihitsy ny lohan’ny fiara tamin’izany, anisan’ny nitarika ny fahavoazan’ny mpandeha rehetra. Tonga teny an-toerana ny zandary nanao ny fanadihadiana rehetra. Nalefa any amin’ny hopitaly Ambatolampy ny naratra sy ny maty.